Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye oo si adag uga hadashay mooshin ka dhan ah madaxweyne Farmaajo
Ayada oo ay dhowaanahaanba suuqa ku jirtay hadal haynta mooshin ay wadaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kana dhan ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa waxaa arintaasi daaha ka qaaday wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada xukuumada federaalka Soomaaliya marwo Khadiijo Maxamed Diiriye.
Mar ay xalay kaga qaybgalayshay xaflad ay xukuumada federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho kusoo bandhigaysay waxqabadkeeda ayaa ay Khadiijo Maxamed Diiriye sheegtay inay jiraan xildhibaano taageero ka helayo siyaasiyiin ku kala sugan Nairobi iyo Dubai kuwaasoo sheegayo inay kor kasoo bilaabayaan mooshinka oo ay marka hore meesha ka saarayaan madaxweynaha.
Wasiirada ayaa sheegtay in horay ay u dhici jirtay in madaxweynaha uu dalban jiray in la bedelo raisalwasaaraha uu isaga soo magacaabo oo aysan ahayn mid ka imaan jirtay baarlamaanka balse hada waxa socdaahi yihiin wax cusub.
“Waxaa maalmahaan socda waa wax cusub, beeni raad ma leh, mooshinka waxaa caado aheyd in Ra’iisul Wasaare lix bilood jooga in la bedelo, baarlamaanka ma bedeli jirin, mooshinka kow waxaa bilaabi jiray Madaxweynihii Ra’iisul Wasaaraha keena, isaga ayaa dhihi jiray lix bilood ka bacdi markii dalqadiisa arki waayo iyo dantiisa gaarka aheyd orda oo iga soo bedela, maanta Madaxweyne Farmaajo damac kale iyo dalqad kale oo u furan ma jirto oo aan aheyn Danta, Dalka iyo Dadka, wuxuu bedelay wixii horay oo dhaqan horay loo yaqiin” ayay tiri Khadiijo Maxamed Diiriye oo sidoo kale ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Dhanka kale waxa ay sheegtay wasiir Khadiijo inay jiraan shaqsiyaad dowlado shisheeyo lacago kasoo qaatay kuwaasoo ay afka ku weerartay sheegtayna inay magacyadooda sheegi karto oo ay hebel iyo hebel dhihi karto kuwaasoo ku kala sugan Nairobi iyo Dubai.
“Dad ayaa raba inay mooshinka keenaan oo ay dhahaan kor ayaa ka soo bilaabeynaa Madaxweynaha ayaa aadeynaa, Meyd macal jameeca yaa raxma, tan tii ma ahan, dad baa raadinaya wixii ay raadin jireen, kuwii shalay maa maanta raba inay xukunka qabtaan, waa ognahay meesha ay joogaan Imaaraadka iyo Nairobi, haddaan rabo magacyadooda waa sheegi karaa hebel iyo hebel, Cadkaanu ku cuni ama ku ciideey waa soo dhamaatay ” ayay si adag u tiri wasiirada.
Hadalka wasiirada ayaa imanaya xili ay jiraan xildhibaano kasoo hor jeeda dowlada ay qaybta ka yihiin ayaga oo dowlado shisheeyo dabada kula jiro kana shaqaynayo inuu dalku bur burka kusii jiro nidaam dowli ahna aan la helin oo uu dalku ahaado mid mar kastaba ku tiirsan dowlado shisheeye.